बाणगंगाका थप ३ जनामा कोरोना पुष्टि : कन्ट्रयाक्ट ट्रेसिङ सुरु, २० जनाको कन्ट्रयाक्ट ट्रेसिङ – Lumbini Darpan Online
Lumbini Darpan Online — ६ भाद्र २०७७, शनिबार ११:५६0comment
लुदअ कपिलवस्तु, ६ भाद्र
बाणगंगा नगरपालिकाका थप ३ जनामा कारोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । यो संगै समुदायस्तरमा कोरोना संक्रमण हुनेहरुको संख्या १२ पुगेको बाणगंगा नगरपालिका स्वास्थ्य साखाले जनाएको छ । वाणगंगा नगरपालिका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख ठगराज पोैडेलका अनुसार समुदाय स्तरका १ जना र बाहिरी देश बाट आएका २ जना गरी ३ जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ । पौडेलका अनुसार भदौ १ गते स्वांव संकलन गरिएका १९० जना मध्ये वडा न.१ का दुई जना र वडा न. २ का एक जना पुरुषमा कोरोना संक्रमण देखिएको हो । यो शनिवार विहान आएको रिपोर्ट हो । अझै केहिको रिपोर्ट आउन बाकिँ रहेको बताइएको छ ।
कन्ट्रयाक्ट ट्रेसिङ सुरु
बाणगंगा नगरपालिकामा कोरोना संक्रमण देखिएका समुदायस्तरका व्यक्तिको कन्ट्रयाक्ट ट्रेसिङको काम शनिबारबाट सुरु भएको छ । पछिल्लो समय समुदायस्तरका कोरोना देखिन थालेपछि यहाँका समुदायस्तरका ब्यक्तिहरु त्रसित भएका छन् । शनिबार मात्र २० जनाको कन्ट्रयाक्ट ट्रेसिङ गरिएको छ । बाणगंगाका ब्यापारी, सामाजिक कार्यकर्ता र अन्य समुदायमा घुलमिल भएका ब्यक्तिमा कोरोना देखिएपछि उनीहरुको सम्पर्क कहाँकहाँसम्म पुगेको छ ? पहिचान गरी पिसीआर जाँच गर्ने तयारी भइरहेको नगरका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख ठगराज पौडेलले जानकारी दिए ।
शुक्रबार मात्र नगरमा ५ जनामा कोरोना पुष्टि भएको थियो ।शनिबार पुन: ३ जनामा पुष्टि भएको छ । संक्रमित उनीहरुको पनि सम्पर्क भएका ब्यक्ति खोजी गरिने र कन्ट्रयाक्ट ट्रेसिङलिइने स्वास्थ्य प्रमुख पौडेलले बताए । नगरपालिका र कपिलवस्तु उद्योग बाणिज्य संघको संयुक्त पहलमा २ सय ८९ जनाको स्बाब संकलन भएकोमध्ये ९० जनाको रिपोर्ट आइसकेको छ ।